यस फिल्मको सिक्वेलमा फेरि पनि एक साथ देखिदै सलमान र आमिर ! – osnepal tv
यस फिल्मको सिक्वेलमा फेरि पनि एक साथ देखिदै सलमान र आमिर !
एजेन्सी-बलिउड अभिनेता सलमान खान र आमिर खान फेरी पनि एकै सााथ फिल्मको सिक्वेलमा देखिने भएका छन्। फिल्मका राइटर दिलीप शुक्लाले यस कुराको पुष्टि गरेका हुन् ।
फिल्म अंदाज अपना अपना’ को काहानि पनि दिलीप शुक्लाले नै लेखेका थिए । फिल्म अंदाज अपना अपना’मा पनि सलमान खान र आमिर खानको पनि अभिनय रहेको थियो दिलीप शुक्लाले एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए ,” म यसको सीक्वल लेखिरहेको छु।
यसको निश्चितलाई कलमबद्ध गर्न गाह्रो छैन। मैले पहिलाको तुलनामा अधिक आकर्षण ल्याउनुपर्छ। “ दिलीप शुक्लाले एक अन्तरवार्तामा मै भनेका थिए म यसको सीक्वल लेखिरहेको छु। शुक्लाले दामिनी’, एंथ’ र दबंग’ तिनै हिट फिल्मको कहानी लेखिसकेका छन्।
यो सिक्वेल सलमान खान र आमिर खान बिना पूरा हुन सक्दैन।” अंदाज अपना अपना’ मा आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन र करिश्मा कपूरले मूख्य भूमिका निभाएका थिए। तर अब यो फिल्ममा आमिर सलमान रणवीर सिंह र वरुण धवन पनि देखिने भएका छन् ।
Previous article बेलिब्रिज मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण
Next article हिलोमा गाडी फसेपछि समस्या
बेलिब्रिज मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण
हिलोमा गाडी फसेपछि समस्या